PinePhone Pro webatara na KDE Plasma Mobile | Site na Linux
PinePhone Pro webatara na KDE Plasma Mobile
Na nso nso a "Community Pine64", raara onwe ya nye n'ichepụta ngwaọrụ mepere emepe, ewebata PinePhone Pro, nkwadebe nke weere n'uche ahụmahụ nke mmepụta nke mbụ PinePhone nlereanya na ndị ahịa nzaghachi.
Ebumnuche bụ isi nke ọrụ ahụ agbanwebeghị, yana PinePhone Pro na-aga n'ihu na-edobe onwe ya dị ka ngwaọrụ maka ndị na-anụ ọkụ n'obi kedu ihe ike gwụrụ nke gam akporo na iOS ma chọọ ebe a na-achịkwa kpamkpam na nchekwa dabere na nyiwe Linux mepere emepe ọzọ.
Atụmatụ PinePhone Pro
PinePhone Pro dabere na Rockchip RK3399S SoC nwere abụọ ARM Cortex-A72 na anọ ARM Cortex-A53 cores. na-agba ọsọ na 1,5 GHz, yana quad-core ARM Mali T860 GPU (500 MHz). N'ụzọ doro anya, yana ndị injinia Rockchip, ụdị RK3399 mgbawa ọhụrụ, RK3399S, ka emepụtara kpọmkwem maka PinePhone Pro, nke na-eme usoro nchekwa ike ọzọ yana ọnọdụ ụra pụrụ iche nke na-enye ohere ịnweta oku na SMS.
Ngwaọrụ Ejiri ya na 4 GB nke RAM, 128 GB eMMC (nke dị n'ime) na igwefoto abụọ (5 Mpx OmniVision OV5640 na 13Mpx Sony IMX258).
Iji tụnyere, Ekwentị Pine nke mbụ nwere 2GB nke RAM, 16GB eMMC, na igwefoto 2 na 5Mpx.. Dị ka ọ dị na ihe nlereanya gara aga, a na-eji ihuenyo 6-inch IPS nwere mkpebi nke 1440 × 720, ma ọ ka mma na-echebe ekele maka iji Gorilla Glass 4. PinePhone Pro na-adaba n'ụzọ zuru ezu na tinye-ons kama azụ. mkpuchi, ewepụtara n'elu maka ụdị mbụ (maka PinePhone Pro na PinePhone ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị ịmata).
Site na PinePhone Pro, ị nwekwara ike ịhụ Micro SD (na nkwado maka nbudata site na kaadị SD), ọdụ ụgbọ mmiri USB-C nwere USB 3.0 na mmepụta vidiyo jikọtara ọnụ iji jikọọ ihe nleba anya, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1 , GPS, GPS-A, GLONASS, UART (site na igwe ekweisi), batrị 3000 mAh (ụgwọ ngwa ngwa 15W). Dị ka na mbụ nlereanya, ọhụrụ ngwaọrụ Na-enye ohere ngwaike gbanyụọ LTE / GPS, WiFi, Bluetooth, igwefoto na igwe okwu.
Arụmọrụ PinePhone Pro dị ka ngwaọrụ gam akporo ndị ọzọ dị n'etiti dị ugbu a ma ọ dị ihe dịka 20% nwayọ karịa akwụkwọ ndetu Pinebook Pro. Site na kiiboodu, òké na ihe nleba anya jikọtara, Enwere ike iji PinePhone Pro dị ka ebe a na-arụ ọrụ Laptọọpụ kwesịrị ekwesị maka ikiri vidiyo 1080p na ịrụ ọrụ dị ka idezi foto na ụlọ ọrụ.
Site na ndabara, PinePhone Pro ga-abịa na nkesa Manjaro Linux na gburugburu KDE Plasma Mobile omenala, mana ndị mmepe na-arụkwa ọrụ n'ịmepụta ihe nrụpụta ọzọ na firmware dabere na nyiwe dị ka postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile, Sailfish, OpenMandriva, Mobian, na DanctNIX nke enwere ike itinye ma ọ bụ budata na kaadị. SD. Firmware jiri kernel Linux nkịtị (ya na patches akwadoro maka itinye na kernel isi) yana ndị ọkwọ ụgbọ ala mepere emepe.
Nkesa nke Manjaro na-ewuli na ntọala nke ngwugwu Arch Linux wee jiri igbe igbe igbe nke ya, Emebere ya site na Git.
A na-akwado ebe nchekwa a na-aga n'ihu, mana nsụgharị ọhụrụ na-agafe ọkwa nkwụsi ike ọzọ. Gburugburu ụlọ ọrụ KDE Plasma Mobile dabere na desktọpụ mkpanaka Plasma 5, ọba akwụkwọ KDE Frameworks 5, igwe ekwentị Ofono, yana usoro nkwukọrịta Telepathy. Iji mepụta ngwa ngwa, a na-eji Qt, ihe mejupụtara Mauikit na usoro Kirigami. A na-eji ihe nkesa mejupụtara kwin_wayland gosi eserese. A na-eji PulseAudio maka nhazi ụda.
Ngwa a ga-eri $399, nke karịrị okpukpu abụọ ọnụ ahịa nke ụdị ekwentị mbụ nke Pine, mana mmụba ọnụahịa na-akwado site na nkwalite ngwaike dị ukwuu.
A na-emepe nnabata nke tupu ịtụ ahịa ugbu a yana a na-atụkwa anya na nrụpụta ọtụtụ ga-amalite na Nọvemba na mbufe mbụ a na-atụ anya na Disemba. Mmepụta nke mbụ $ 150 PinePhone agaghị aga n'ihu na-agbanwe agbanwe.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, you nwere ike ịlele nkọwa na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » PinePhone Pro webatara na KDE Plasma Mobile
Mattermost 6.0 ewepụtalarị ma ndị a bụ akụkọ ya
Devuan 4.0 "Chimaera" sitere na Debian 11, Linux 5.10 na ndị ọzọ